PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - ICountryman inkulu uma uyiqhathanisa nezindala
ICountryman inkulu uma uyiqhathanisa nezindala
Isolezwe - 2017-10-13 - EZEZIMOTO - FANELESIBONGE BENGU IMOTO: MINI COOPER S COUNTRYMAN
EMLANDWENI weminyaka engu-57 wakwaMINI iCountryman entsha yiyona enkulu futhi ongayisebenzisela izinto eziningi kunazo zonke asebake bazakha.
Uma uyiqhathanisa nendala inde ngo-20 centimetres, ivuleke ngo-3 centimetres kanti i-wheelbase yayo yelulwe ngo-7.5 centimetres.
Lokhu kwenza ukuthi isikhala ngaphakathi sanele abagibeli abahlanu futhi kuvuleke nesokubeka izimpahla. Bheka ngoba ibhuthi lingu-450 litres kodwa uma ulalise izihlalo zangemuva liba ngu-1 309 litres. Lokhu kusho ukuthi isikhala sikhule ngo-220 litres uma kuqhathaniswa nendala.
Ibhuthi livulwa ngebhathini futhi noma usulivala yinto efanayo.
Uma uyubuka uyayibona ukuthi isesigabeni samaSUV amancane ngoba iphakeme futhi ivulekile. Ngaphambili ishaya ngamalambu amakhulu eLED azungezwe ngama-daytime running lights. Ngezansi inama fog lights. Kwigrille iqoshwe uS obomvu ukuze ungadideki ukuthi yiMINI Cooper S Countryman.
Inyathela ngamasondo anamarimu angu-18 inch futhi okhakhayini inama-roof rails. Ngemuva ishaya ngezinqawe ezimbili yabe isiqoshwa uCountryman ngamagama amakhulu kwi-tailgate kanjalo noCooper S.
Ebengihamba ngayo ibimnyama wena owabona umdlali we-rugby uTendai “Beast” Mtawarira oshaya ngebala elizothile. NjengeMINI Cooper S Countryman, uBeast unomzimba ololongekile futhi unamandla ngoba uma kuyi-scrum uye ohola phambili ozakwabo.
IMINI Cooper S Countryman ishaya ngenjini engu-2.0 litre eyi-4clylinder kaphethroli enamandla angu-141 kW netorque ku-280 Nm.
Ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-7.4 kanti ijubane layo elikhulu ngu-225 km/h.
Uma uhamba ngayo uze ukhohlwe ukuthi inomzimba othe ukuba mkhulu ngenxa yokuthi iyashesha. Vele kuthiwa akukho ndlovu yasindwa wumboko wayo kodwa zikhona izimoto ezivele zindode nje nokuyinto oyizwa ngendaba kule moto.
Uma unyathela ivele igxume ihlale futhi uma ishintsha igiya njengoba iyi-8 Speed Steptronic transmission uyezwa ukuthi izinqawe ezingemuva azihlobisile kodwa ziyaqhuma.
Kuya ngawe ukuthi ufuna ihambe kanjani ngoba uma ufuna yonge uphethroli uyifaka kuGreen Mode. Uma ufuna ikukhombise ubunjalo bayo uyifaka kuSPORT.
Ekhoneni ikunikeza ukuzethemba ngoba inamathele.
Ngaphakathi ibishaya ngezihlalo zesikhumba ezi cream. Ezangaphambili ziyakwazi ukufudumala uma kubanda. Okhakhayini ishaya ngegilazi eze iyoshaya ngemuva ipanorama glass sliding/tilting sun roof. Ngaphambili inendilinga ezungeze i-screen esidlala umsakazo, esiveza inkombandlela nokunye. IneMINI Excitement Package eyenza ukuthi ikhanye ngemibala eyehlukene kule ndilinga.
Umthandi womsindo zizomjabulisa izindaba zokuthi inezipikha ezigqomayo zeHarman Kardon.
Ngakwezokuphepha iphuma namama anti-lock brakes (ABS), electronic brake force distribution (EBD) neCornering Brake Control (CBC), Dynamic Stability Control (DSC) with brake assistant, hill start assistant, brake dry function, Fading Brake Support, Dynamic Traction Control (DTC), Electronic Differential Lock Control (EDLC) nePerformance Control.
Le moto incintisana nezimoto ezifana ne-BMW X1, MercedesBenz GLA, Audi Q2 nezinye. Inani MINI COOPER S COUNTRYMAN R517 000
Ungavakashela ku-www. miniselect.co.za ukubheka imali ongayikhokha nyanga zonke ehambiselana nephakethe lakho.